रिसर्च गर्नसके पुष्ष व्यवसाय राम्रो व्यवसाय हो - सुजाता देवकोटा
रिसर्च गर्नसके पुष्ष व्यवसाय राम्रो व्यवसाय हो – सुजाता देवकोटा
१ वर्ष अगाडि १ वर्ष अगाडि Abinash Thapa	0 Comments चितवन, फूल खेति, मखमली, सयपत्री, सुजता देवकोटा
यूवा पुष्ष व्यवसायी सुजाता देवकोटा विगत चार बर्षदेखि चितवनको भरतपुरमा रहेर पुष्प व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले पछिल्लो समय यूवाहरुको आकर्षण बैदेशिक रोजगारी हुदै गएको अबस्थामा यहि बसेर केहि गर्न सकिन्छ भन्ने एक उदाहरण पेश गर्नुभएको छ । यहि विषयमा हामिले छोटो कुराकानी गरेका छौ ।
प्रश्न : सुजाता जि तपाईलाई एक्सप्रेस समाचारको विशेष कुराकानीमा स्वागत छ ?
प्रश्न : फूलहरुको पर्व तिहार नजिकिदै जादाँ एक यूवा पुष्ष व्यवसायिको रुपामा तपाईको दैनिकि कसरी वित्दै छ ?
फूल सौन्दर्यताको प्रतीक मात्र नभएर हामी नेपालीहरुको धर्म र आस्थाको वस्तु पनि हो । यसर्थ नेपाली हरुको महत्त्वपूर्ण चाढ तिहार आउँदै गर्दा व्यस्तता अझै धेरै बढेको छ । यसो त दैनिकी संधै नै फूलबारी र फूल संग भलाकुसारी गरेरै बित्छन् तर यो समयमा हाम्रो आत्मीयता अझै बढेको छ ।
प्रश्न: तपाइले पुष्ष खेति गर्न थाल्नु भएको कति समय भयो अनि अहिले कुन कुन जातको फूल खेति गर्दै हुनुहुन्छ ?
चार वर्ष अघि february 14 को दिन रोज बेचेर पुष्प व्यवसायको सुरुवात गरेको हो । सोही वर्ष देखिनै कल्कतिया जातको सयपत्रीको खेती पनि सुरु भएको हो र अहिले विभिन्न अरु indoor/ outdoor का फल तथा फूल हरु छन् तर खेती भने सयपत्रीको मात्रै हो । हामी सयपत्री वर्ष भरि नै उत्पादन गर्छौ ।
प्रश्न: तपाईको विचारमा नेपालको पुष्प बजार कस्तो छ ? कत्तिको सम्भावना छ ?
अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा “फूल पनि किनेर लगाउने होर ?” भन्ने सोच हावी भएको पाइन्छ तर यो सोच युवाहरुमा बिस्तारै परिवर्तन हुदै गएको छ । नयाँ प्रविधि अपनाउन सके सम्भावना राम्रो छ ।
प्रश्न : के पुष्ष व्यवसाय गरेर जिवनयापन गर्न सकिन्छ ?
जीवनयापन गर्न सकिन्छ / सकिन्न भन्दा पनि आफू कस्तो खालको जीवन चलाउन चाहान्छु भन्ने कुरा हो । जुन कुनै व्यवसायमा पनि जोखिम हुन्छ , सजक भएर काम गर्न सके / रिसर्च गर्न सके पुष्ष व्यवसाय राम्रो व्यवसाय हो । अर्को करा लगानी कस्ले , कसरी गर्छ भन्ने कुराले पनि उसको जीवनयापन कस्तो हुन्छ भनेर निर्धारण गर्दछ ।
प्रश्न: फूलको व्यवसाय कसरी गर्न सकिन्छ अनि कति लगानी लाग्छ ?
सर्वप्रथम त आफूलाई के कुरामा रुचि छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो । आफ्नो रुचि भएको कुरा लाई पैसामा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सधै दिमागमा भै रहनु पर्दछ । आफू संग कति लगानी गर्न सक्ने पुँजी छ यसबारे पनि सोच्नु पर्यो । सबैभन्दा ठूलो कुरा मार्केट रिसर्च नै हो चाहे existing मार्केट रोज्नुस् या completely नयाँ ।
प्रश्न : अन्तिममा तपाई जस्तै युवा जो आफ्नै देशमा केहि गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
राजनीतिक अस्थिरता देशमा हुदाँ / विकासले कछुवाको चालमा पनि पाइला नचाल्दा यूवाहरु विदेश पलायन हुनु स्वभाविक हो तर यसो भन्दै सबै विदेशीने हो भने भविष्यमा देश विदेशीको हातमा नजाला भन्न सकिन्न । जसरी आफ्नो बुवा गरीब छन् भनेर सन्तान अरुको बुवाको घरमा आश्रय लिएर बस्दैनन् बरु कालान्तरमा आफ्नो घर सम्पन्न बनाउन लागि पर्छन् त्यसै गरि देश छोड्नु भन्दा बनाउन लागि पर्नु बुद्धिमान हुन्छ ।
पुष्प व्यवसायी सुजाता देवकोटा
र यो पनि हेर्नुस – बालि तथा पशुपंक्षी बिमा बारे सम्पूर्ण जानकारी
← तरुण दल स्थापना दिवशको अवसरमा निजगढमा सरसफाई(फोटो फिचर)
सबै खालका क्रिकेटबाट सन्न्यास लिने शेन वाट्सनको घोषणा →